dr.fone [Official] - Qalabka A for All Users macruufka & Android
Dhibaatooyinka Mobile, qalabka si ay u xaliyaan.
qalabka All aad u baahan tahay si ay u sii at 100% aad orodka mobile.
Isku day inaad u free Isku day free
macruufka System Recovery
macruufka Data kaabta & celi
macruufka macruufka Screen taariikhqorihii
macruufka LINE Data kaabta & celi
macruufka KIK Data kaabta & celi
macruufka Viber Data kaabta & celi
Android kaabta Data & celi
Android taariikhqorihii Screen
qalabka telefoonka More
Macaamiisheena jecel dr.fone
Waxaad doono, sidoo kale.
Barnaamijka Great! Adeegga Macaamiisha Great!
by Juan Carlos F, macruufka
Ka shaqeeya wakhti kasta
Waxaan leeyahay software ka jabay Android kabashada xogta muddo ah hadda iyo ayaa waxa uu u adeegsaday on telefoonada kala duwan xafiiska. Waxaad ma rumaysan karo inta telefoonada aad burburay toddobaad dhaaf. Tani waxay run ahaantii ka caawisaa helitaanka faahfaahin macaamiisha iyo dokumentiyo muhiim ah ka qalabka ay.
kooxda IT Setcom, Android
software ugu wanaagsan ee macruufka
by Tyrone Williams, macruufka
dr.fone xidhmo - saarka Android Data Recovery
Dr.Fone waa wax soo saarka ugu danbeeyay dhalanteed abuuray, looga adkaan, Marna u maleeyeen off, fikradaha la yaab leh, trully weyn. Tani waxay aad ka odhan kari waayeen, Dr.Fone bedelay wejiga android laftiisa galay brand ah wajiga cusub. Dr.Fone ka shaqeeya oo dhan cayn kasta oo technology, qalabka xitaa xaq u soo degin inuu chip ugu yar micro. Waxaa dunida ku soo jeedin doonaa agagaarka of aad u badan, oo baadad cusub la yaab leh, ma aha oo kaliya in, sida ay u samayn karto wax kasta oo wax. wax kasta oo si kastaba ha ahaatee. Waa xooggiisii ​​oo ah in ay leeyihiin.
by Eduardo, macruufka
Waxaan u maleynaayey in gabdhaha macaan 16 photos dhalashadiisa iyo videos iga hallowday weligiis. software Tani badbaadiyey aan saaxiga !! Haddii ay jirto ahaa rating sare, dr fone hubaal noqon lahayd in mid ka mid ah in ay iga heli. Oo weligay ma aan wax i dareensiisay jidkaas hor helay. xitaa waan tegey online in search of code coupon sababtoo ah lacag aan ku jiray si ku yar aan couldn''t awoodi iyo dhowaa ilmada ilaa aan ka helay mid ka mid ah oo helay qiimaha badh !! Ku mahadsan tahay in aad dr.fone !!